မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ အကိတ်ဆုံး နဲ့ ကောက်ကြောင်း အလှဆုံး ဆယ်လီ (၁၀)ဦး – Shwe Sar
မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ အကိတ်ဆုံး နဲ့ ကောက်ကြောင်း အလှဆုံး ဆယ်လီ (၁၀)ဦး
By Shwe SarPosted on January 22, 2021 January 22, 2021
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ဒီတစ်ခါတော့ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ အကိတ်ဆုံး ကောက်ကြောင်း အလှတွေ ကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ မြန်မာ့ အကိတ်ဆုံး နဲ့ နာမည်ကြီး Cele (၁၀) ဦးရဲ့ စာရင်းကိုဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်နော်….
ပရိတ်သတ်ကြီး ကို ဘေဘီမောင်နဲ့ ကတော့ အထူးမိတ်ဆက်ပေးစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူးနော်။ ဘေဘီမောင်ကတော့ စွဲမက်ဖွယ်ရာ အလှတရားစစ်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မင်းသမီးချောလေးဖြစ်သလို ပုရိသတွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုတွေကိုလည်းရရှိထားပါတယ်နော်။အလှူအတန်းတွေကိုလည်း ရက်ရောသူတစ်ဦးဖြစ်လို့ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အချစ်တွေကို ပိုင်ဆိုင် ထားပါသေးတယ်နော်…
မင်းသမီးချောလေး ဆုအိမ်စံ ကတော့ မြန်မာဝတ်စုံလေးတွေကို ဝတ်ဆင်တက်ပြီး သူမရဲ့ စွဲမက်ဖွယ်ရာ ကောက်ကြောင်းအလှတွေကို ပရိသတွေ အတွက် ဖော်ပြပေးလေ့ရှိပြီး ဘယ်လိုပုံစံ အဝတ်အစားနဲ့မဆို လိုက်ဖက်လှတဲ့ ကောက်ကြောင်းအလှပတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပါနော်။အဲ့တာကြောင့်လည်း ပုရိသတွေရဲ့ သည်းသည်းလှုပ် အားပေး ဝန်းရံခြင်းတွေကို ရရှိပိုင်ဆိုင်နေသူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်…
ပုရိသတိုင်းရဲ့ အသည်းကျော် အိမ်မက်နတ် သမီးလေး နန်းမွေ့စံကတော့ ဒီစာရင်းရဲ့ နံပါတ် (၈)နေရကနေ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။သူမကတော့ ဆက်ဆီမော်ဒယ်အဖြစ်အနုပညာလေကထဲကို ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး ပုရိသတွေရဲ့ အထူးအာရုံစိုက်ဝန်းရံခြင်းကို ခံရသူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။အထူးသဖြင့် သူမရဲ့ လုံးဝအကြမ်းစားပုံရိပ်တွေကြောင့် ပုရိသတွေ အမြဲတမ်း အားပေးဝန်းရံခြင်းကို ခံနေရတဲ့ မော်ဒယ်မလေး ဖြစ်ပါတယ်နော်….
ဆက်ဆီမော်ဒယ်မလေး ရှင်ယွန်းမြတ်ကလည်း ပုရိသတွေရဲ့ ပါးစပ်ဖြားမှာ အထူးရေပန်းစားလှပြီး အမိုက်စားကောက်ကြောင်းအလှတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းကြောင့်လည်း ပုရိသတွေရဲ့ အားပေး ဝန်းရံခြင်းတွေကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်…
မော်ဒယ်မလေးခင်လွှမ်းကတော့ တောင့်တင်းတဲ့ ခန္ဓာကိုအလှတရားတွေနဲ့အတူ သေးသွယ်တဲ့ ခါးနဲ့ လုံးဝန်းကြီးမားလှတဲ့ တင်သားဆိုင်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ကောင်မလေးဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် သူမရဲ့ တင်သားတွေက ပုရိသတွေ ကြားမှာ အထူးရေပန်းစားလှပါတယ်နော်…
အနုပညာလောကထဲကို စတင် ဝင်ရောက်လာချိန်ကနေ ယနေ့ အချိန်ထိ ပုရိသတွေရဲ့ အခိုင်အမာ အားပေးဝန်းရံခြင်းကိုခံနေရတဲ့ ကချင်မော်ဒယ်မလေးတစ်ယေညက်ဖြစ်ပြီး။Single Mom ဘဝနဲ့ ရပ်တည်ကာ သမီးလေးကိုစောင့်ရှောက်ပေးနေပေမယ် ခေးကြီးလုကိုတော့ အသေရရ အရှင်ရရ ချူချင်သူတွေ ဝိုင်းနေလောက်အောင် တောင့်တင်းဖြောင့်စင်းတဲ့ ကောက်ကြောင်းအလှကြီးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အတွက် ပုရိသတွေရဲ့ အသည်းကျော် ခေးကြီးဖြစ်နေတာပါ….
မော်ဒယ်မလေး စုလှိုင်ဝင်းကိုတော့ ပရိတ် သတ်ကြီး သိရှိပြီူသားဖြစ်မှာပါနော်။အထူးသဖြင့် သူမရဲ့ TikTok လေးတွေက ပုရိသတွေကြားမှာအထူးရေပန်းစားလှပြီး သူမရဲ့ ကြီးမားလှတဲ့ တင်ပါးကြီးတွေကြောင့် ပုရိသတွေရဲ့ အိမ်မက်ထဲက နတ်သမီးလေးဖြစ်နေမှာတော့ အသေချာပါပဲနော်…
မင်းသမီးချောလေးဝါဆိုမိုးဦးကတော့ မော်ဒယ် လောကမှာ အောင်မြင်နေပြီး လက်ရှိအချိန်ထိလည်း အနုပညာအလုပ်တွေကိုလုပ်ကိုင်နေကာ စွဲမက်ဖွယ်ရာ ညှို့ချက်ပြင်းတဲ့ကောင်းကြောင်း အလှတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး မြင်သူတိုင်းက ငေးရလောက်အောင် ပြေပြစ်တဲ့ ကောက်ကြောင်းတွေကြောင့်လည်း ပုရိသတွေရဲ့ အထူးဝန်းရံမှုတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်….
ပရိတ်သတ်ကြီသရေ ဒီစာရင်း ရဲ့ နံပါတ်တစ်နေရာကို ရယူထားသူကနော့ ပုရိသတွေ ရဲ့ အချစ်တော် မအေးသောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ မအေးသောင်း ကတော့ သူမရဲ့ ကောက်ကြောင်းအလှတွေနဲ့ စွဲမက်ဖွယ် အလှတရားတွေကို မြန်မာဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ ဖော်ပြလေ့ရှိပြီး တကယ့်ကို ရှိုက်ဖိုကြီးငယ်အသွယ်သွယ်နဲ့ ပုရိသတွေရဲ့ အိမ်မက်နတ်သမီးတွေထဲက တစ်ယေညက်အဖြစ်အမြဲပါနေမယ် ဆိုတာတော့ အသေချာပါပဲနော်…. ချစ်ရတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ Cele တွေထဲက အကိတ်ဆုံး အတောင့် အဖြောင့်ဆုံး Cele မတ်မတ် (၁၀)ဦးကို ဖော်ပြခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ ပရိတ်သတ်ကြီးအနေနဲ့ သိရှိတဲ့ အကိတ်ဆုံး Cele တွေရှိရင် လည်းပုံလေးတွေနဲ့ တကွ Comment မှာ ဖော်ပြခဲ့ကြပါဦးနော်
ပရိတျသတျကွီးရေ ဒီတဈခါတော့ မွနျမာနိုငျငံ ရဲ့ အကိတျဆုံး ကောကျကွောငျး အလှတှေ ကို ပိုငျဆိုငျ ထားတဲ့ မွနျမာ့ အကိတျဆုံး နဲ့ နာမညျကွီး Cele (၁၀) ဦးရဲ့ စာရငျးကိုဖျောပွပေး လိုကျပါတယျနျော….
ပရိတျသတျကွီး ကို ဘဘေီမောငျနဲ့ ကတော့ အထူးမိတျဆကျပေးစရာလိုမယျမထငျပါဘူးနျော။ ဘဘေီမောငျကတော့ စှဲမကျဖှယျရာ အလှတရားစဈတှကေို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ မငျးသမီးခြောလေးဖွဈသလို ပုရိသတှရေဲ့အားပေးခဈြခငျမှုတှကေိုလညျးရရှိထားပါတယျနျော။အလှူအတနျးတှကေိုလညျး ရကျရောသူတဈဦးဖွဈလို့ ပရိတျသတျတှရေဲ့ အခဈြတှကေို ပိုငျဆိုငျ ထားပါသေးတယျနျော…
မငျးသမီးခြောလေး ဆုအိမျစံ ကတော့ မွနျမာဝတျစုံလေးတှကေို ဝတျဆငျတကျပွီး သူမရဲ့ စှဲမကျဖှယျရာ ကောကျကွောငျးအလှတှကေို ပရိသတှေ အတှကျ ဖျောပွပေးလရှေိ့ပွီး ဘယျလိုပုံစံ အဝတျအစားနဲ့မဆို လိုကျဖကျလှတဲ့ ကောကျကွောငျးအလှပတှကေိုပိုငျဆိုငျထားတာပါနျော။အဲ့တာကွောငျ့လညျး ပုရိသတှရေဲ့ သညျးသညျးလှုပျ အားပေး ဝနျးရံခွငျးတှကေို ရရှိပိုငျဆိုငျနသေူလေးပဲဖွဈပါတယျနျော…
ပုရိသတိုငျးရဲ့ အသညျးကြျော အိမျမကျနတျ သမီးလေး နနျးမှစေံ့ကတော့ ဒီစာရငျးရဲ့ နံပါတျ (၈)နရေကနေ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။သူမကတော့ ဆကျဆီမျောဒယျအဖွဈအနုပညာလကေထဲကို ဝငျရောကျလာခဲ့ပွီး ပုရိသတှရေဲ့ အထူးအာရုံစိုကျဝနျးရံခွငျးကို ခံရသူလေးပဲဖွဈပါတယျနျော။အထူးသဖွငျ့ သူမရဲ့ လုံးဝအကွမျးစားပုံရိပျတှကွေောငျ့ ပုရိသတှေ အမွဲတမျး အားပေးဝနျးရံခွငျးကို ခံနရေတဲ့ မျောဒယျမလေး ဖွဈပါတယျနျော….
ဆကျဆီမျောဒယျမလေး ရှငျယှနျးမွတျကလညျး ပုရိသတှရေဲ့ ပါးစပျဖွားမှာ အထူးရပေနျးစားလှပွီး အမိုကျစားကောကျကွောငျးအလှတှကေို ပိုငျဆိုငျထားခွငျးကွောငျ့လညျး ပုရိသတှရေဲ့ အားပေး ဝနျးရံခွငျးတှကေို ရရှိပိုငျဆိုငျထားသူလေးပဲ ဖွဈပါတယျနျော…
မျောဒယျမလေးခငျလှမျးကတော့ တောငျ့တငျးတဲ့ ခန်ဓာကိုအလှတရားတှနေဲ့အတူ သေးသှယျတဲ့ ခါးနဲ့ လုံးဝနျးကွီးမားလှတဲ့ တငျသားဆိုငျတှကေိုပိုငျဆိုငျထားတဲ့ ကောငျမလေးဖွဈပွီး အထူးသဖွငျ့ သူမရဲ့ တငျသားတှကေ ပုရိသတှေ ကွားမှာ အထူးရပေနျးစားလှပါတယျနျော…
အနုပညာလောကထဲကို စတငျ ဝငျရောကျလာခြိနျကနေ ယနေ့ အခြိနျထိ ပုရိသတှရေဲ့ အခိုငျအမာ အားပေးဝနျးရံခွငျးကိုခံနရေတဲ့ ကခငျြမျောဒယျမလေးတဈယညေကျဖွဈပွီး။Single Mom ဘဝနဲ့ ရပျတညျကာ သမီးလေးကိုစောငျ့ရှောကျပေးနပေမေယျ ခေးကွီးလုကိုတော့ အသရေရ အရှငျရရ ခြူခငျြသူတှေ ဝိုငျးနလေောကျအောငျ တောငျ့တငျးဖွောငျ့စငျးတဲ့ ကောကျကွောငျးအလှကွီးတှကေို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့အတှကျ ပုရိသတှရေဲ့ အသညျးကြျော ခေးကွီးဖွဈနတောပါ….
မျောဒယျမလေး စုလှိုငျဝငျးကိုတော့ ပရိတျ သတျကွီး သိရှိပွီူသားဖွဈမှာပါနျော။အထူးသဖွငျ့ သူမရဲ့ TikTok လေးတှကေ ပုရိသတှကွေားမှာအထူးရပေနျးစားလှပွီး သူမရဲ့ ကွီးမားလှတဲ့ တငျပါးကွီးတှကွေောငျ့ ပုရိသတှရေဲ့ အိမျမကျထဲက နတျသမီးလေးဖွဈနမှောတော့ အသခြောပါပဲနျော…
ပရိတျသတျကွီးရေ မငျးသမီးခြောလေး အိခြောပိုကတော့ ပရိတျသတျကွီးနဲ့ အထူးမိတျဆကျပေးနစေရာမလိုလောကျအောငျကို သိရှိပွီးသားဖွဈမှာပါနျော။လကျရှိခြိနျမှာ အောငျမွငျကြျောကွားတဲ့ မငျးသမီးလေးတဈလကျဖွဈနပွေီး သူမရဲ့ ရူးသှပျစှဲလနျးဖှယျရာ ကောကျကွောငျးအလှတှကေတော့ ပုရိသတှရေဲ့ စကားဝိုငျးမှာ မပါမဖွဈနရောယူထားတာပဲဖဈပါတယျနျော…
မငျးသမီးခြောလေးဝါဆိုမိုးဦးကတော့ မျောဒယျ လောကမှာ အောငျမွငျနပွေီး လကျရှိအခြိနျထိလညျး အနုပညာအလုပျတှကေိုလုပျကိုငျနကော စှဲမကျဖှယျရာ ညှို့ခကျြပွငျးတဲ့ကောငျးကွောငျး အလှတှကေို ပိုငျဆိုငျထားပွီး မွငျသူတိုငျးက ငေးရလောကျအောငျ ပွပွေဈတဲ့ ကောကျကွောငျးတှကွေောငျ့လညျး ပုရိသတှရေဲ့ အထူးဝနျးရံမှုတှကေို ပိုငျဆိုငျထားတာပဲ ဖွဈပါတယျနျော….
ပရိတျသတျကွီသရေ ဒီစာရငျး ရဲ့ နံပါတျတဈနရောကို ရယူထားသူကနော့ ပုရိသတှေ ရဲ့ အခဈြတျော မအေးသောငျးပဲဖွဈပါတယျနျော။ မအေးသောငျး ကတော့ သူမရဲ့ ကောကျကွောငျးအလှတှနေဲ့ စှဲမကျဖှယျ အလှတရားတှကေို မွနျမာဝတျစုံလေးတှနေဲ့ ဖျောပွလရှေိ့ပွီး တကယျ့ကို ရှိုကျဖိုကွီးငယျအသှယျသှယျနဲ့ ပုရိသတှရေဲ့ အိမျမကျနတျသမီးတှထေဲက တဈယညေကျအဖွဈအမွဲပါနမေယျ ဆိုတာတော့ အသခြောပါပဲနျော…. ခဈြရတဲ့ ပရိတျသတျကွီးရေ မွနျမာနိုငျငံ ရဲ့ Cele တှထေဲက အကိတျဆုံး အတောငျ့ အဖွောငျ့ဆုံး Cele မတျမတျ (၁၀)ဦးကို ဖျောပွခဲ့ပွီးပွီဆိုတော့ ပရိတျသတျကွီးအနနေဲ့ သိရှိတဲ့ အကိတျဆုံး Cele တှရှေိရငျ လညျးပုံလေးတှနေဲ့ တကှ Comment မှာ ဖျောပွခဲ့ကွပါဦးနျော
Previous post အလန်းစားပုံစံနဲ့ ဆက်ဆီ ကျလွန်းအောင်ရိုက်ထား တဲ့ နန်းမွေစံ
Next post ခန္ဓာကိုယ်ကိတ်ကိတ်လေး ကို ထင်ထင်ရှားရှားလေး ပေါ်လွင်အောင် အမိုက်စား လေ့ကျင့်ပြနေတဲ့ အေးမြတ်သူ ရဲ့ အသဲယားစရာ ဗီဒီယိုလေး
“မြန်မာ့ အရေး တရုတ်က ဘက်မလိုက် ဘဲ အားလုံး နဲ့ ထိ တွေ့သွားမယ်လို့ ဆို”
အိုကွယ် ကလေး ရယ် စူးရှ တဲ့ အသံကြောင့် ဈာပန ခမ်းမထဲ ရှိ …
ကျွန်တော်တို့ လုပ်နိုင်တာတွေ ကို နိုင်သလောက် လုပ်ကြရအောင်ဗျာ ဆိုတဲ့ အကြောင်း ကို ပြောပြပေး လာတဲ့ ဒါရိုက်တာ ဏကြီး
မနေ့ညက ဆူညံတွေ များစွာကြားခဲ့ရအပြီး ဘဝမှာ လုံခြုံစွာနေထိုင်ရဖို့ တစ်အားအရေးကြီးမှန်း နားလည်လာကြောင်း ဖွင့်ဟ လိုက်တဲ့ ​မေမြင့်မိုရ်